Dhagayso:- Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo Sharaxaad ka bixiyey Sababta Puntland Hormarka u gaartay. | Puntland Vision
Dhagayso:- Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo Sharaxaad ka bixiyey Sababta Puntland Hormarka u gaartay.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo kamid ah wafdiga la socda madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa ka hadlay hormarka ka socday magaalada Garowe ee caasumada dawlada Puntland.
Mudane Maxamuud ayaa sheegay inay labo arimood ay hormar ku gaareen shacabka deegaanada Puntland kuwaas oo kala ah inay yihiin dad waxbarashada heer wanaasan ka gaaray iyo sidoo kale Nabad galyada ay ka dhigteen deegaanadooda.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu dhamaan magaalada Garowe uu ku maray lug uuna la dhacay Nabada iyo hormarka laga hirgaliyey caasumada Puntland isagoo bogaadiyey shacabka Puntland.
Gudoomiye Tarsan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay xukuumadan hada talada haysa uu hogaaminayo Madaxweyne Gaas inay Garowe ka hirgalisay 24 Jid kaas oo ah hormar xad dhaaf ah sida uu sheegay Tarsan.
Hadalkan ayuu Tarsan ka jeediyey Khudii uu ka horjeediyey Ardayda Jaamacada Barigga Africa fara Garowe xiligii uu madaxweynaha Soomaaliya uu Booqday.